Ukhathalelo lobuqu lwaMadoda | Amadoda anesitayile (iphepha 3)
Ezona ntlobo zentshebe ngokwemo yobuso
Ibhokhwe epheleleyo: kwabo bakhulisa iindevu kwaye abazi ukuba oko kuya kulungela i-aesthetics yabo, okanye kwabo bakhetha isitayile esibukhali ngakumbi, ibhokhwe ejikeleze umlomo ihamba kakuhle nazo zonke iintlobo zobuso, ngaphandle kwezo abanesilevu esibhengezwe kakhulu.
Amadoda aneenwele ezintle anokufumana ivolumu engakumbi kwaye ayifihle ngamaqhinga alula esiwachazayo kweli nqaku.
Xa uneenwele ezintle, eyona nto ibalulekileyo kukongeza ivolumu kwizinwele zakho xa zizonke. Ukufezekisa esi siphumo, olona khetho lufanelekileyo kukuya kwi-gradient okanye kwi-cut cutered.
Umahluko phakathi kwe-deu yangasese kunye nesiqholo
I-Agua de toilette intle kwaye icokisiwe kwaye iyaqhelana nolusu. Kunzima ukukhetha isiqholo okanye i-eau de yangasese, nokuba yeyakho okanye unikele njengesipho.
Amadoda anobuso obude kufuneka azikame iinwele zawo
Sinikezela ngothotho lweengcebiso zesitayile samadoda anobuso obude ukufezekisa ukuhambelana ngakumbi, kwaye ke ubuso obunomtsalane ngakumbi.
Izinwele ezinqabileyo? Zama ezi ngcebiso ukuze ungonakalisi iinwele zakho
Izinwele ezinqabileyo kunzima ukuzilungisa, kodwa akunakwenzeka. Apha sixelela ukuba yintoni amadoda anokuyenza ukufezekisa iinwele ezifunwayo ngaphandle koku.
Iingcebiso ngentshebe elungiswe kakuhle
Kukulungele ukuqala ngokuhlamba iindevu. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zeeshampu eyenzelwe ngokukodwa iindevu. I-shampoo yeklasikhi inokuhambelana nolu nyango.
Inkqubo ye-8 yeyure
Irejimeni yeyure ezisi-8 yindlela yokutya elandelwa ngabantu abaninzi kwaye iphakamisa ukutya onokutya kakhulu njengoko ufuna iiyure ezisi-8, kwaye emva koko ukhawuleze iiyure ezili-16 ezizayo.
Zeziphi ezona shampu zintle zokuchasana namadoda?
Sikuzisa ezona shampu zintle zokulwa ukungcola kwamadoda ukuze ukwazi ukulwa ngokufanelekileyo ngokuhlamba iinwele zakho rhoqo.
Iingcebiso zokususa amabala ansundu ebusweni ngokwendalo
Iindawo ezimdaka ezibangelwa kukucheba ziqhele ukuba zezona zimbi ekunokubonwa ngazo.
Yintoni abafazi abayicingayo nge-fallatio
Iqabane lezempilo elithandabuzekayo okanye ubudlelwane obumiselweyo: uninzi lwabasetyhini abalahla lo mkhuba baphila amava abashiye incasa ekrakra kwaye abakulungelanga ukuqala kwakhona.
Iingcebiso zokuhambisa iinwele ngokwendalo
Unyango lwendalo lunokusebenza kwaye lusempilweni. Ezinye iingcebiso ezinje ngezi sizicebisayo namhlanje zikuvumela ukuba uhlambe iinwele zakho, ngaphandle kokubhenela kwiimveliso ezingezizo.
Unyango lwasekhaya lokuhambisa amanzi emakhwapheni
Eminye imimandla yomzimba ibuthathaka kwaye ibuthathaka kunezinye, kwaye phakathi kwazo sifumana amakhwapha ahlala esokola kwiziphumo zokubila, izidambisi, ukubekwa lilanga, njalo njalo.
Ngaba ulungisa iinwele nge-hairspray okanye i-gel?
Sichaza ixesha lokuseta iinwele zamadoda nge-hairspray kwaye uyenze nini usebenzisa ijeli yeenwele.
Wuphele unyaka ngeenwele ezilungileyo ngezi zintathu zokucheba iinwele kunye nezindululo zeenwele
Nazi iziphakamiso ezintathu zokuthambisa iinwele ukuqala unyaka ngeenwele ezilungileyo.
Ipropolis yokulwa nealopecia
Ngokwabaphandi, ipropolis nayo iya kuba neepropathi zokulwa ilahleko ebantwini.
Isikhokelo senoveli yesiqhumiso ngo-2014
Kulo nyaka kuye kwakho iimveliso ezininzi ezinikele ekwenzeni iziqholo zamadoda njengenxalenye ...
Baqaphela ntoni abafazi xa bebona indoda?
I-Beardilizer, isichumiso esingazange senziwe ngaphambili kwiindevu
Amanye amadoda akuthiyile ukutsheva. Abanye baphupha ngokuba neendevu ezipheleleyo, kodwa abayithandi inkathazo yeenwele. Kuthekani ukuba iBeardilizer inokunceda?
Iingcebiso zokuphepha ukuluma isikhonkwane
Umkhwa ombi wokulunywa kwezikhonkwane unezizathu zengqondo. Bayaziluma iinzipho zabo xa kukho ukungalawuleki kakuhle kweemvakalelo ezithile ezinje ngokuba novalo, unxunguphalo okanye uloyiko.
Ngaba unika ii-deodorants ukubaluleka kwazo?
Ngaba unika ii-deodorants ukubaluleka kwazo xa kuziwa kwezoqoqosho? Fumana apha.
Izibonelelo zesepha yesalfure
Isepha yesalfure yenye yezona zicetyiswayo ngabagqirha besikhumba ukulwa namabala kunye namaqhakuva.
Ziziphi iinzuzo zokulala ze?
Abanye bakhetha ukulala begqunywe kakuhle, abanye benempahla encinci kwaye abanye, bengenanto. Inyani yile yokuba ngokothuka ngokubanzi, ukulala ngaphandle kwempahla kubonelela ngezibonelelo ezininzi: olu khetho lolona luqwalaselweyo ngokusengqiqweni.
Ukucheba iigels kunye nokubaluleka kokuchazwa kweendevu
Sithethile ngokubaluleka kokuba intshebe yethu ichazwe kakuhle, kunye nemveliso efanelekileyo yokwenza njalo, ukucheba iigel.
UGerard Butler inkwenkwezi yephulo elitsha likaHugo Boss
Emva kweminyaka engaphezulu kwe-15 yempumelelo, uHugo Boss ukwazile ukuchaza indoda yanamhlanje ngokubhengeza ukuba ...
Iindawo zokucheba ezingenakuphoswa
Iindevu ziyimfashini ngakumbi kunangaphambili kwaye inkathalo yayo ininzi kwaye yahlukile. Kodwa, akukho nto ilunge ngakumbi ...
Iingcebiso ngokuthomalalisa ulusu lwakho emva kokucheba
Xa sitsheva, ulusu luyacaphuka. Ukuthintela ukutsha, ukurhawuzelela, amanxeba kunye namaqhakuva anokuvela emva kokucheba, kukho izisombululo zendalo.
Iimveliso eziyimfuneko zokuthwala ibhegi yakho yokuhamba
Ngaba uya eholideyini kwaye sele ucingile malunga nento oza kuyifaka kwingxowa yakho yangasese? Ke ukuba akukho nto ilibalekileyo, eyona nto ilula kukwenza uluhlu. Makhe sibone ezinye zeemveliso eziyimfuneko ekuya kufuneka ubenazo xa useluhambeni.
Umzimba kaGillette, ukucheba ngeenxa zonke
Ukucheba akufuneki kujongelwe phantsi kuba abasetyhini aba-8 kwabali-10 abawukhathalelanga umzimba ogudileyo ngaphandle kweenwele. UGillette uyifumene imithambo-luvo kwaye wenza ukuba kube lula emadodeni: ngoku banelayi yomzimba yokucheba umzimba wabo wonke.
Ijeli yeshawa yokuhombisa yamadoda
Kukho uninzi lweemveliso zobuhle emadodeni. Iziqholo, iimveliso zeenwele, izithambiso ezimnyama, ukhathalelo lwasemva kokucheba ... Kukho neezinto zokuhlamba zexabiso eliphambili ezilungiselelwe amadoda.
8 iziqholo ezikhethekileyo zale ntwasahlobo
Iiveki ezimbalwa ngaphambi kokuba kufike usuku lukaTata, zininzi iifemu ezisebenzisa ithuba lazo ...
Ubungqina bukaGentleman: I-Boss Bottled Unlimited
Iimpawu zethu kwivumba elitsha likaHugo Boss. Nangona, enyanisweni, isiqholo asisiyonto intsha, kodwa lushicilelo olulinganiselweyo lweBoss Bottled yakudala
Olona nyango lasemva kokutsheva kwamadoda
Ukuze ungabinaso isikhumba esixineneyo, kukho iimveliso ezihlengahlengisiweyo ezinjengeegel zasemva kokucheba, iikhrimu kunye nothotho.
5 izimvo ukunika le Christmas
Ngaphantsi kwenyanga ngaphambi kokufika kweKrisimesi ekudala ilindelwe, baninzi kuthi abafuna ...
Embindini wenyanga kaMovember, funda ukulungisa kunye nokukhathalela iindevu zakho
Inyanga ka-Novemba yinyanga yomanyano lwamadevu. Kule posi sikunika iingcebiso ezimbalwa eziluncedo zokuyilungisa kwaye uyigcine ngokugqibeleleyo.
Amaqhinga angama-20 okucheba ngokugqibeleleyo
' Mamaxesha amaninzi…
Incakuba yombane okanye iincakuba?
Ngalo lonke elixesha sithethile nawe malunga nelona xesha lilungileyo lokucheba, malunga nokuba yintoni shave ...
I-Invictus, ingaphezulu kunevumba elimnandi, indlela yokuphila
Le Autumn, uPaco Rabanne uyothusa kwakhona ngevumba elimnandi, indalo yakhe yamva nje, i-Invictus, ivumba elikhethekileyo elijolise kuye wonke umntu ...
Ngokuqhelekileyo kwaye kupholile. I-eau de cologne ayisoze ithathe indawo yesiqholo kodwa, njengayo yonke into ebomini, inayo.
Invictus, ivumba elitsha likaPaco Rabanne
Oko bendigcina enye yezona mfihlo zibalaseleyo zikaPaco Rabanne kangangexesha elithile. Ukuphehlelelwa kwevumba elitsha ...
Uyigcina njani intshebe yakho yeentsuku ezintathu igqibelele
Sele usithathile isigqibo, kwaye ufuna ukwenza intshebe-ntsuku ezintathu, kodwa kukho into ekukhathazayo. Njenge…
Ijeli okanye igwebu lokucheba, ukhethe eyiphi?
Kuxhomekeka kuhlobo lolusu lwakho kunye neenwele zobuso, ukucheba amagwebu kunokuba ngcono kuwe kunejel, okanye kungenjalo. Apha sichaza iimpawu zayo eziphambili.
Kufuneka wenze ntoni ukuthintela ukuba nenkqayi
I-Alopecia okanye into esiyibiza ngokuba yinkqayi yenye yezona zinto zoyikekayo ebantwini, eziqala ...
Ungazibopha njani iinwele ezinde emadodeni
Iinwele ezinde ziya zixhaphaka phakathi kwamadoda, ke ngoko ukwazi ezinye iindlela zokubopha iinwele ezinde kunokuba luncedo olukhulu kwezi meko.
Ungayiphepha njani intshebe erhawuzelayo
Iindevu ezinde zihlala zirhawuzelela njengoko zikhula, kodwa ukuze uphephe oku kucaphukisa nazi ezinye iingcebiso zokunciphisa ukurhawuzelela kwindevu.
Luhlobo luni lokudibanisa endimele ndiluthenge?
Amaxesha amaninzi ukuthenga iimveliso zezithambiso yi-odyssey ukuba asinalo ulwazi olusisiseko sokwazi ukuba loluphi uhlobo ...
Kukuthini ukucheba okufanelekileyo kwesikhumba sakho?
Isigqibo sokuqala xa ukhetha ukucheba, ngaba isisiseko, i-razor manual okanye i-razor yombane? Uninzi lwe…
Loluphi ukhathalelo endilifunayo kuhlobo lolusu lwam?
Indoda nganye ineemfuno ezithile kulusu kwaye ngenxa yesi sizathu ifuna ukhathalelo oluthile ngokwale ngxaki unayo ...
Umva wamva yingxaki exhaphakileyo phakathi kwamadoda, kodwa ukuze ubonise umqolo wakho ngaphandle kweentloni ehlotyeni, nazi iingcebiso zokuphelisa le ngxaki.
Ukukhutshwa komzimba, esisiseko ngaphambi kokutshona kwelanga
Singayibiza ngeendlela ezininzi, ukuyikhupha, ukuyikhupha, ukuyikroba, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo yenye yezona zinto zisisiseko ...
Ukubaluleka kunye neenzuzo zokusebenzisa iscrub yobuso
Kucacile ukuba amadoda ayawukhathalela nangakumbi umfanekiso wethu kwaye sinenkxalabo ngenkangeleko kunye nokunyanyekelwa ...
Zara kuye ivumba lamadoda
UZara Kwakhe wenziwe ngeziqholo ezibini zamadoda acetywayo yinkampani yexabiso eliphantsi uZara, kule ntwasahlobo yehlobo lonyaka ka-2013.
Ungasifaka njani isicelo sokujonga iliso ngokuchanekileyo
Imeko yamehlo wamehlo akho athetha lukhulu malunga nomntu ngamnye kuthi, kwaye le ...
5 iziqholo ezigqibeleleyo zoSuku lukaTata
NgoLwesibini olandelayo, nge-19 kaMatshi, lusuku lukaTata kwaye awukamthengeli naziphi na izipho? Intoni…
I-HUGO Red, ivumba elimnandi elidlula kwimida
Ukuba kwilixa elidlulileyo, ukusuka eTenerClase besichukumisekile ngokupheleleyo ngokwahluka nje, ivumba elophule amacebo, ngale ...
Iingxaki zokudada? Namhlanje sikubonisa kuMadoda aneSitayile sezona shampu zintle zokulwa ukungcola onokuzifumana ezivenkileni
Nangona zininzi izinto zokucheba kwiimarike, enye yezona mveliso zibalaseleyo esinokuzisebenzisa ukucheba ioyile yomnquma.
Hugo Boss ishawa yeegel
Ukuba ufuna ukukhathalela ulusu lwakho ukuya kwelona liphezulu, akukho nto ingcono kuneeHels Boss shael gels.
IHalloween INDODA Zilumkele ngokwakho, uzama iJesús del Pozo entsha
«Ubusuku bunephunga lalo, ngaba uyalivumba? Ngaba lulusu lwesibini, okanye lolokuqala? I-Apple Martini iyavela ...
Ukunyamekelwa kolusu: amanyathelo ama-5 kulusu olufezekileyo
Unonophela njani ulusu lwakho? Namhlanje ukuya kwimpelaveki, xa sinexesha elininzi kakhulu kuthi, siyahamba ...
Phila ixesha elide!
Ngokuqinisekileyo uninzi lwenu luxhalabile ... Ngosuku olunje, useeshaweni, uyahlamba ...
I-Homem, iimveliso zobuhle zamadoda
Njengoko kuhlala kusenzeka ngoku, kukho amadoda amaninzi azinakekelayo, yiyo loo nto sithetha ngeemveliso zobuhle zeHomem.
I-Versace Blue Jeans Perfume
Apha sithetha nawe namhlanje malunga nevumba elimnandi lobudoda elivela eVersace, lawo onke amadoda.
Iilensi zonxibelelwano ezinemibala yamadoda
Ukuba ufuna ukutsala umdla ngaphezulu kwako konke, ungathandabuzi kweli hlobo ukukhetha ukunxiba iilensi zonxibelelwano ezinemibala ukuze ujongeke nzulu.
Iindidi zentshebe ngokobuso bakho
Ukuba ufuna ukubonakala ugqibelele ngalo lonke ixesha, apha sithetha ngezona zitayile zindevu zihambelana nodidi lobuso bakho.
Iimveliso zokhathalelo lomntu
Sithetha ngezona mveliso zintle zamadoda ukuze ube nolusu neenwele zikwimeko efanelekileyo.
2 yendalo emva kokutsheva kukhathalelo lolusu lwakho
Ukuba uthanda ukunxiba ubuso bakho ngaphandle kweendevu yonke imihla awunakukhetha ngaphandle kokucheba zonke ...
I-Spanx Shapewear eyindoda
Apha unezona mpahla zangaphantsi zibalaseleyo zokumila umzobo wakho kuhlobo lweSpanx.
Iingcebiso malunga ne-eyebrow waxing waxing
Amashiya angaphezulu kwesithintelo esithintela ukubila okanye amanzi ekufikeni kwamehlo ethu….
Amafutha Amadoda nguVictorio kunye noLucchino
Imaski eyenziwe ekhaya yokuhambisa iinyawo
Iinyawo zilityelwe ngonaphakade kukhathalelo lomzimba wethu. Siye saqhela ukunkcenkceshela ubuso nomzimba wethu ...
Uthotho lweLebhu iMax LS, yamadoda afunwayo
Ukuba kuye kwafuneka ndichaze ukuba yintoni i-Max LS, ndingathi sisiphelo esiphakamileyo sonyango lweLab Series ...
Ihlabathi lobuhle livule ngokupheleleyo iingcango zalo kwicandelo lamadoda. Kude kube kudala ...
Ubuso bamadoda: Monsieur nguJean Paul Gaultier
Enye yeefemu zokuqala ukumilisela umgca wokwenza ubukhethekileyo emadodeni nguJean Paul osoloko ekhuthaza ...
Ukunciphisa iigels zesisu
Sibonile mva nje ukuba izithambiso zesisu zamadoda ziye zanda, kodwa ngaba bazakusebenza ngokwenyani? Ngaba baya kuba njalo ...
Enye yeemaski ezilula ukuyenza kwaye esebenzayo kakhulu yimaski yeasprini. Ngokukodwa ...
Amakha amatsha amadoda avela kwiPacha Ibiza
Apha unamavumba amatsha ePacha, amavumba amathathu ahlukeneyo kulo naluphi na uhlobo lomntu.
Makeup yamadoda: ukufihla izangqa ezimnyama
Enye yezona zinto ziphambili kubuhle bamadoda kukufihla izangqa ezimnyama ezoyikekayo. Ukungalali, ukudinwa ...
Amagumbi okuhlambela, iilwandle, ukusetyenziswa kwesarong, ifashoni, isarong eyindoda
Elona xesha lilungileyo lokucheba
Uninzi lwamadoda, ukucheba yinto yemihla ngemihla ethi ibe yenye ...
Bila, ungavumeli ukuba yingxaki
Ngaba ukubila kube yingxaki ongazi ukuba ungayenza kanjani? Ukuqaphela ukuba sibilile kuhlala kusenza singonwabi, ...
Abantu abadumileyo bayabila nabo
Ubuso obaziwa njengoChris Martin, uKevin Bacon, uAlexander Banderas, uTom Cruise okanye uJavier Bardem, ngaxa lithile ...
Imouse yeenwele, uKhathalelo lobuqu, Izitayile zeenwele, iinwele, ezokuLungisa
Amanqaku olula owesilisa.
Ukolula amanqaku, i-aesthetics, Ukupheka ngokulula, ukhathalelo lomntu, ukutya,
Amaqhinga amane okuphucula ulusu lobuso
Ukunyamekela ulusu lobuso kulungile, kwaye nokwazi iimfihlo ezithile ezinokukunceda wenze njalo. Indoda nganye inoluhlobo lolusu ngoko ke kufuneka ilunge.
Izitayile zeenwele zamakhwenkwe aneenwele ezolulayo
Kuqhelekile ukubona ukuba amakhwenkwe anamhlanje azikhathalela iinwele zawo ngokufanayo, okanye ngamanye amaxesha ...
Nangona intsomi isithi ngabafazi bodwa abadaya iinwele zabo, ndicinga ukuba kungaphezulu kokucaca ukuba amadoda aya evuma ukuba nawo ayahamba ngenwele ukuze adaye iinwele zawo. Lukhetho olufanelekileyo ukugcina usesikhathini.
I-Gymnastics kunye neqabane lakho (Icandelo II)
Ukwenza umthambo njengomntu otshatileyo kunezibonelelo ezininzi ngakumbi kunokwedwa. Isibini ngababini simnandi ngakumbi
Isiqholo singaphezulu kunephunga nje.
Nokuba yeyiphi na indlela yokususa iinwele, qaphela ezi ngcebiso zilandelayo ukuze ukususwa kweenwele kungabi yintuthumbo
Ambalwa kakhulu amadoda azinyamekelayo iinwele zawo njengoko kufanelekile kwaye angoyikisa ukutshintsha inkangeleko yawo kwaye adibanise neenwele zawo ...
Isichazi-magama sezinto zokuthambisa zamadoda (M)
Ukufunda indlela yokuzikhathalela ngokuchanekileyo, akukho nto ilunge ngakumbi kunokuqala ngeziseko zezithambiso. Ngale sichazi-magama sezithambiso unga ...
Isigqumathelo esenziwe ekhaya ukucoca indawo ye-T
Kule bhlogi sele sikwazise ngokusesikweni «T zone«. Ibunzi, impumlo kunye nesilevu zenza le nxalenye yobuso ...
Yintoni ukwenza mhlophe kwilungu lesini?
Ngaba uqaphele ukuba ulusu kwindawo yesini lumnyama? Ewe, ukuba ufuna ukugqibelela kwi ...
Isitshixo sombane kunye ne-shaving foam ngoku ziyahambelana
Ingxoxo engunaphakade phakathi kwentsimbi yombane kunye nencakuba. Amadoda afuna indlela ekhawulezayo kunye ...
Ungazisika njani iinwele zakho ukuze uzinxibe?
Ifashoni yokunxiba iinwele zesitayela sika-Elvis ziya kuqhubeka kulo lonke ixesha lonyaka. Uninzi lwabantu abadumileyo sele benxibe itoupee kwi ...
Ungayiphucula njani imbonakalo yemilebe yakho?
Akuncedi nganto ukukhathalela ubuso bakho ngokugqibeleleyo ukuba ukubonakala kwemilebe yakho kubi kakhulu. NONE
Ukuthambisa ubisi lomzimba Aloe Vera Deliplús
Kwilizwe lezithambiso, yonke into ayizukuba kudidi oluphezulu njengeBiotherm Homme okanye ii "brand" ezinje ...
Ukubeka i-deodorant kuvavanyo, elona xesha lilungileyo lasehlotyeni, apho kushushu khona ...
Kufanele ukuba sele sinescreen selanga engxoweni yethu yangasese, okanye nangaphezulu. Kodwa ukuba awunayo ...
Ukuba zimbini iimveliso umntu ngamnye azisebenzisileyo ngexesha elithile ebomini bakhe, ngokuqinisekileyo yiNivea yaMadoda ...
Amakhwapha achetyiweyo, ewe okanye hayi?
Ihlobo lisondela ngendlela engenakuphepheka. Kuya kushushu yonke imihla (ubuncinci apha eValencia) kunye nenye ye ...
Iincakuba, kufuneka ulitshintshe kangaphi?
Uninzi lwethu lucheva usebenzisa iincakuba, kodwa ukuba asizigcini ezo blade zikwimeko entle, ziya kubenzakalisa ubuso bethu….
Ihlobo liya ngokuncipha. Saqala ukucinga malunga "nokusebenza kwebikini". Sifuna ukubonakala sincinci, simnyama, ...
Uchebe, ngaphambi okanye emva?
Okwangoku, kwinkulungwane ye-XXI, kukho abo abangacacanga ukuba leliphi ixesha elifanelekileyo lokucheba, ngaphambi okanye ...
Ungazigcina njani iinwele zakho zilungiswe kakuhle?
Xa kuziwa ekuthetheni ngeenwele, sonke sinosuku xa sijonga esipilini kwaye sifumanisa ukuba ...
Ndazi njani ukuba ndinenzipho yokungunda?
I-Nail fungus yinto enokuthi ingathandeki kwaye ingonwabisi. Esi sifo, esibizwa ngokuba yi-onychomycosis, ungasifumana ...
Iingcebiso zokunciphisa intshebe yakho
Ukuba uyathanda ukukhulisa iindevu, kufuneka usoloko uyigcina icocekile kwaye izilungise kakuhle ukuze wenze uluvo oluhle ...
Iseti yokucheba ekhethekileyo kaGillette
Ukuba usacinga ngoluhlu lwezipho zale Krismesi, namhlanje siphakamisa umbono omtsha ...
Ezona ziqholo zilungileyo zihambelana nesiQholo sePerfume
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, iPerfume Academy ibibambe igala eMadrid ukuhambisa amabhaso awonga ...
Akufani ukuba mncinci, womelele okanye utyebe, ke kubalulekile ukuba wazi ukuba yeyiphi impahla oza kuyinxiba ngokwe ...
Iingcebiso zokucheba ngomatshini wombane
Ukucheba yinto ekufuneka yenziwe ngamadoda ubuncinci ama-3 ngeveki. Ukuba ufuna ukwazi ukuba yintoni ...
Intwasahlobo ifikile kwaye enye yeengxaki ezinkulu zamadoda kukubonakala komngundo kwi ...
Ungazikhathalela njani ii-dreadlocks?
Andisoze ndenze ii-dreadlocks. Hayi kuba ndingabathandi, kuba kubonakala ngathi abonwabanga kwaye ngenxa yokuba andinakudlulisa ...
Yeyiphi imascara oyikhethayo?
Makeup ayiseyonto yomfazi. Ngoku amadoda nawo athambise izithambiso. Ukuba ukhethe oku ...
Amaxesha amaninzi amadoda aya kwindawo yokwenza iinwele anokumela ingxaki enkulu xa ethatha isigqibo sokuba ...
Iingcebiso zokufihla impandla
Akukho nto imbi ngaphezu kokuqala ukuqaphela ukuba iinwele zakho ziyacutheka, kodwa akufuneki ungene kwithemba. Ukuba…
Iindlela zokuSusa iiNwele ezingqina
Ukususwa kweenwele kuya kusiba ngakumbi kwaye kusefashonini. Amadoda amaninzi akhethe kwiminyaka yakutshanje ukuwafaka ...
Ungayilungisa njani okanye uyisuse iitattoos
Mhlawumbi uninzi lwabo bakha bafumana itattoo abayekanga ukucinga ukuba yintoni ...
Isiqhumiso esitsha samadoda nguCarolina Herrera
Umzi wefashoni uCarolina Herrera uzimisele ukoyisa intengiso yeziqholo yamadoda, kunye nevumba lawo elitsha, ...
Ukubuyela ecaleni. Iindidi.
Kwamanye amadoda, ukwenziwa kweempawu ezintle ezisecaleni kubalulekile ukuvelisa umfanekiso wobuso obufunwayo. Kum,…
Ngaba ukunxiba umnqwazi kubangela ukulahleka kweenwele?
Amadoda amaninzi, ngenxa yeemeko ezahlukeneyo, athanda ukunxiba iminqwazi ngokugqithileyo, alibale ukuba ukusetyenziswa rhoqo kwale ngubo ...
UNacho Figueras, uPolo weRalph Lauren
Umdlali wePolo oqeqeshiweyo, uNacho Figueras ukhethwe njengommeli weziqholo zePolo zoMhlaba wePolo….
NgeVeet yaMadoda, hayi uboya emzimbeni
Olunye uhlobo lwasehlotyeni apho kubonakala ngathi isifuba esichebiweyo sisefashonini. NgokukaVeet yaMadoda, kwaye ...
Kumashumi eminyaka adlulileyo iindevu zazinxulunyaniswa namadoda atyekele ebufanasini. Ngaba yile minyaka ...
I-Philips Nivea yaMadoda, i-shaver yombane enezixhobo zokuthambisa ukhathalelo lolusu ...
Izinwele esifubeni, ewe okanye hayi?
Abanye abantu bafuna ukuba neenwele zesifuba ukuze bahoye amaqabane abo, kwaye kubonakala ngathi ...
I-Pantene Pro V eyongezelelweyo i-Smooth: Izinwele ezithe nkqo
Kukho iintlobo ezininzi zeeshampu kwaye uhlambulule iikhrim ezithembisa ukulungisa iinwele zakho kwaye uzishiye zilawulwe kwaye zibe silky, kodwa ...
Iindlela zokomisa iinwele
Abanye abantu banengxaki yokungazi ukuzomisa iinwele, nokuba kungenxa yokuba asikaze sifunde ukuyenza okanye kuba ...
Usebenzisa njani i-cream rinse?
Isithambisi sokuthambisa okanye isicoci yimveliso yokhathalelo lweenwele engenakusetyenziswa ...
Iingcebiso zefashoni zamadoda atyebileyo
Inye kuphela into esizimisele ukuyenza kukunika uthotho lweengcebiso kumadoda atyebe kakhulu, nangona ukutya okuncinci ...
Makeup yamadoda, sele iyinyani
Umkhwa ojolise kwimetroxuality kunye nenyaniso yokuba amadoda aya esazi ngakumbi ngenkangeleko yawo, ...
Uhlamba njani ubuso bakho kakuhle
Kwizihlandlo ezininzi sikhetha ukuhlamba ubuso bethu ngesepha kunye namanzi, ndichebe kwaye sikhawuleze siye kuthi ...
Umtsalane wokuba neenwele ezingwevu
Nangona ngamanye amaxesha ubusoyikisa ngokufaka idayi kubo, uninzi luyalichasa ikhubalo leenwele ezingwevu. Nangona amanye amadoda ...
Impandla: ungayinyamekela njani inkqayi?
Enye yezona zinto zixhalabisayo ukuba amadoda agqithayo kwiminyaka engama-25 ahlupheke kukucheba. Kwaye ...
Iimveliso zezithambiso zokuzikhupha
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo besithetha ngokugxothwa emadodeni kwaye, njengoko besenzile ...
Eyona ndlela ixhaphakileyo yokucoceka iindlebe zakho ziziciko zomqhaphu, nangona oku kungakushiya intsalela okanye ungazenzakalisa ...
I-AX Shower Gel
Ngokwam, ndiyakholelwa ukuba i-AX deodorants ibangela umonakalo ekhwapheni nakubathengi bayo ngenxa yomxholo wayo oqinileyo ...
Mhlawumbi awucingi ngezikhonkwane zakho ngaphandle kokuba uzipeyintile ngombala oluhlaza okanye kunyoko ...
Iindevu zeentsuku ezintathu njengenxalenye yokubonakala kwakho
Yindlela ekuthiwa yeyekholeji okanye ukubonakala kwangaphambili kwaye kubonakala ngathi yenye yeentandokazi ngabayili abaninzi xa bezisa ingqokelela yabo kwaye sele iyinxalenye yendlela entsha.
Iipropathi zeAloe Vera kulusu lwendoda
Isityalo se-Aloe Vera sivela e-Afrika kwaye sineepropathi ezininzi, phakathi kwazo ezi: ukuthambisa, ukuphilisa kunye nokuchasana nokudumba
Iingcebiso ngokucheba okugqibeleleyo (II)
Kwinqaku elandulela eli malunga nendlela yokucheba ngokugqibeleleyo sithethile malunga nenqanaba ngaphambi kokucheba, oko sikubiza ngokuba ...
Izibonelelo zepear zomntu
Ipere enencasa kwaye ebonelela ngezibonelelo ezininzi kwimpilo yamadoda.
Iitattoos yayililungu le-Eurasia kumaxesha e-Neolithic, ifunyanwa nakwamanye ama-mummies anokudala ukuya kuma-6.000 ...
Iingcebiso ngokucheba ngokugqibeleleyo (I)
Ngaphakathi kwenkqubo yethu yemihla ngemihla ifihla into engaziwayo sonke esicinga ukuba siyazi kakuhle: Siza kuhamba…
Ii-apile zamabala amabala
Ukuba unengxaki yamabala okanye amaqhakuva, akukho nto ingcono kuneeapile okanye nayiphi na i-antioxidant ukunqanda la mabala acaphukisayo ...
Ngaphambi kokucheba ioyile, kutheni uyisebenzisa?
Akunyanzelekanga, kodwa ukusebenzisa ioyile elungileyo yangaphambi kokutsheva kungaphaya kokucetyiswa ukuba uyahlupheka xa ucheba, okanye ...
Ukuqhutywa ngokucacileyo. Sele sinezizathu zokuba singayichebi le ntshebe yeentsuku ezintathu eyadala umonakalo omkhulu kudala….
Iindlela zokufaka iinwele ezingena ndevu
Emva kokucheba, kudla ngokuvela amaqhakuva acaphukisayo. Amaxesha amaninzi, emva kokucheba okusondeleyo, incam yeenwele ...
Iindidi ezahlukeneyo zePerfumes
Amafutha ngumxube oqukethe iioyile ezifanelekileyo, isiselo esinxilisayo kunye nesilungisekayo, esisetyenziselwa ukubonelela ...
Umdlalo weDior Homme
Umdlalo weDior Homme. "Livumba elimnandi kakhulu kwaye linamandla", eliyilelwe kuphela amadoda anxibe ijean endaweni ...
Indlela yokusebenzisa ijeli yeenwele?
Ijeli yimveliso esetyenziswa ngamadoda amaninzi xa kusenziwa inwele. Ingasetyenziswa zombini ...
I-Titan T1 Gym, indawo yokuzivocavoca ekhayeni lakho
Kwabo bakufumanisa kunzima ukushiya amakhaya abo ukuya ejimini kuba imozulu imbi okanye ...
Ungalukhusela njani ulusu kwingqele
Ngokubanda, ubuso yinxalenye yomzimba obonakaliswe kakhulu kwizinto ezinjengomoya, amaqondo obushushu asezantsi, ...
Amabala, ungawathintela njani?
Amabala abonwa ngobukho bamaqhakuva, iintloko ezimhlophe ezibizwa ngokuba ziipustules kunye nezinye izilonda ezinje ngee papules, maqhuqhuva, ...
Ukukhula kancinci kweendevu
Inkampani yezithambiso uClinique iphuhlise uluhlu lweemveliso ezilungiselelwe ngokukodwa ulusu lwamadoda. Oku kuguqulela kwizithambiso ...
Ukuluhlaza okuluhlaza okwesibhakabhaka, isiqholo sabakhohlisi abazelweyo
Ukujonga ngamehlo, uncumo olwaziyo, ukungqubana "okungenanjongo"; izixhobo ezenziweyo ngexesha lokuba yinxalenye ...
Ngaba amadoda afuna impumlo encinci?
Impumlo eyindoda ithwala iintsomi. Kuthiwa ukuba enkulu impumlo, kokukhona ...
Isiqholo kuhlobo ngalunye lomntu
Ukukhetha isiqhumiso esiza kusisebenzisa asiyonto incinci. Kwelinye icala, nangona lukhetho ...
Uzihlamba njani iinwele zakho ngokwamanqanaba ama-5
Sonke siyazi ukuba kufuneka sizihlambe njani iinwele zethu: zimanzi, zithambe kwaye zihlanjululwe. Kodwa kukho amaqhinga onokuthi uwafunde ukugcina yakho ...
Chetywa njenge mnene. Isiqendu 1: Ibhrashi
Kwizithuba ezilandelayo ndiza kubhala malunga nezixhobo kunye neendlela eziyimfuneko zokucheba njengendoda. Bucala ngasekhohlo…
Ngaphambi kokucheba iizithambiso kunye neoyile
Nangona kungabalulekanga, ikrimu elungileyo yangaphambi kokutsheva okanye ioyile kuyacetyiswa kakhulu njengenxalenye yemihla ngemihla ...